HomePod Operating System Beta 3 Version 15 Manampy Fanohanana Audio tsy misy fatiantoka | Vaovao IPhone
Ora vitsy lasa izay, namoaka ny beta fahatelo an'ny rindrambaiko mitantana ny HomePod i Apple, beta iray izay hamaha ny olana tafahoatraHo an'ireo mpampiasa sasany dia nanandrana tamin'ny beta faharoa ary tsy nahafantatra na oviana na oviana i Apple. Saingy, tsy tonga irery ity kinova vaovao ity, satria mampiditra zava-baovao iray lehibe.
Ity beta fahatelo ity, azo omena ho an'ny HomePod sy ny HomePod mini dia manolotra ihany amin'ny farany fanohanana audio tsy misy fatiantoka avy amin'ny Apple MusicFanohanana izay efa nampanantenain'i Apple herinandro lasa izay nefa mbola tsy tanteraka. Aleo tara toy izay tsy mbola nisy.
Rehefa nampiditra kalitaon'ny lossless tamin'ny Apple Music i Apple dia nitaky ny HomePod dia mety mifanaraka amin'ity kalitao ity, fa ny kinova vaovao an'ny rindrambaiko HomePod dia navoaka ary mbola tsy tonga.
Miaraka amin'ny rindrambaiko HomePod 1 beta 15, ny orinasa dia nanolotra ny safidy tsy misy fatiantoka ao amin'ny app Home, fa indrisy fa tsy nandeha izy io. Miaraka amin'ny beta 2 dia nesorin'i Apple tanteraka ity safidy ity rehefa nanamboatra ny olana izy.
Ankehitriny, miaraka amin'ny fanombohana ny beta fahatelo, ny mpampiasa Apple Music rehetra miaraka amin'ny HomePod na HomePod mini ao an-trano aryafaka mankafy kalitao avo indrindra ianao amin'ireo hira misy amin'ny kalitao avo indrindra amin'ny sehatry ny mozika streaming an'ny Apple.
Raha manana an'ireto fitaovana ireto ianao ary te-hizaha ny fanohananao ho an'ny audio lossless, ny zavatra voalohany tokony hatao dia hametraka iOS 15 ho an'ny daholobe na ny developer beta, ka amin'ity fomba ity, ny iPhone dia afaka manavao ny beta farany azo omena ny HomePod.
Raha mbola tsy nanao izany ianao nametraka ny beta beta ho an'ny daholobe iOS 15, ao amin'ny iPhone News dia asehonay anao daholo ny dingana tokony harahina mba hanatanterahana an'io dingana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » HomePod OS Beta 3 Version 15 Hoy koa i Lossless Audio Support
Nanaiky an'i Apple ny fitsarana amerikana iray tamin'ny fifanolanana tamin'ny fifaninanana App Store